फोटोशप आधारभूत: कसरी फोटोको अंश मेटाउने क्रिएटिव अनलाइन
जोस एन्जेल | | सामान्य, Photoshop, ट्यूटोरियलहरू
सामान्य शटको साथ फरक फोटो प्रभावहरू सिर्जना गर्न, हामीलाई फोटोशपको आवश्यक पर्दछ। यो सँधै फोटोशप्ड हुन्छ। इन्स्टाग्रामको लागि अब सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने प्रभावहरू भनेको शरीरका अ disapp्गहरू हराउनु वा यसलाई लेभिट बनाउनु हो। तर यो मात्र हुनेछैन, तपाईलाई दुई फोटो पनि चाहिन्छ Casi बराबर
प्राथमिक, सामाजिक नेटवर्कमा कलाकारहरूको फोटोहरू हेर्दा यो केहि जटिल देखिन्छ। तर यो ट्यूटोरियल पछि, तपाई यो धाराप्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाइँ तपाइँका साथीहरूको ईर्ष्या हुन सक्नुहुन्छ! म आफैंले गरेको कुराको वास्तविक उदाहरण दिन गइरहेको छु, हामीलाई एक धारणा दिन।
अब यदि तपाइँसँग म के कुरा गर्दै छु भनेर एक विचार छ, सही? तपाईमले देख्नुहुने नै, मेरो शरीरलाई तन्काइएको मात्र होइन, तर त्यहाँ प्रकाश, छाया र केही विवरणहरू जस्तै धुवाँ वा पछाडि भित्ता पनि छ। र हामी यो नाम पनि लिन गइरहेका छौं, यो लेखमा यो सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछैन। हामीले गर्नुपर्ने कुरामा हामी ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं।
1 पहिलो, फोटोग्राफी (ट्राइपडको साथ)
2 फोटोशप पहुँच गर्दै
3 उपकरणहरू प्रयोग गर्न
4 केही अतिरिक्त स्पर्श
5 फोटोशप आधारभूत
पहिलो, फोटोग्राफी (ट्राइपडको साथ)
यस प्रकारको फोटोमा काम गर्न सक्षम हुन, तपाईले वातावरण छनौट गर्नुपर्नेछ र एउटा डबल फोटो लिनु पर्छ। हाम्रो मतलब के हो? ठिक छ, तपाईंले पाउदान पाउनुहुनेछ र फोटो खिच्नु पर्ने वस्तु कार्यमा जानुहुनेछ। त्यो हो, यदि तपाईं उसलाई ल्विटि to गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले व्यक्तिलाई केहि स्थान पाँस्नु पर्छ «मलA आवश्यक उचाइ हुन तल। म तपाईंलाई निम्न फोटोहरूमा देखाउँछु। यो जोड दिन जरुरी छ कि यो एक तिपाई र एक पूर्ण स्थिर फोटो संग हुनुपर्दछ किनकि हेरफेरमा दुबै तस्बिरहरू पूर्ण रूपमा एकै हुनुपर्दछ।। अब तपाईं देख्नुहुनेछ।
यस पछि, फोटो फ्रेमबाट फोटोग्राफ र उनीहरूको सम्बन्धित समर्थन हटाउनुहोस् हामी तलको छविमा देखाउनेछौं, जुन मुख्य छविको केही अंश हटाउन र यो प्रभाव पार्ने प्रभाव सिर्जना गर्न सन्दर्भको रूपमा प्रयोग हुनेछ। यी प्रकारका फोटोग्राफहरू प्राप्त गरिसकेपछि, हामी क्यामेरा ब्याकप्याकमा राख्न सक्छौं, सम्बन्धित गाडीमा जान सक्छौं र हामीले छुने कम्प्युटर स्क्रिनमा जान सक्छौं। यसको लागि म फोटोशप प्रयोग गर्नेछु, यद्यपि एफेनिटी जस्ता प्रोग्रामहरूले पनि यसको लागि काम गर्न सक्दछ। मैले यो परिदृश्यको लागि नयाँ छवि रोजें र हामी यसको साथ काम गर्नेछौं।
(क्षमा गर्नुहोस् यदि फोटो खराब तरिकाले जलेको छ भने)
फोटोशप पहुँच गर्दै
हामी मुख्य फोटोशप स्क्रिनमा नायकको साथ छवि थप्छौं र अर्को ट्याबमा हामी पृष्ठभूमिको साथ मात्र छवि राख्छौं। त्यसो भएपछि हामी पृष्ठभूमि छविलाई ट्याबमा मोडेलको तस्विरमा ड्र्याग गर्छौं र तल तह राख्छौं (यसरी मुख्य छवि हेरेर)।
'समूह १' यस प्रक्रियामा आवश्यक केहि छैन, तिनीहरू केवल पहिले गरिएका प्रयासहरू हुन्।
उपकरणहरू प्रयोग गर्न
उपकरणहरू धेरै सरल छन्: एक लेयर मास्क र ब्रश प्रयोग गर्नुहोस्। यो सामान्य ब्रश प्रयोग गर्नका लागि सिफारिश गरिन्छ, जबसम्म यो कुनै विशिष्ट वस्तु छैन जुन तपाइँले सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। सामान्य, १००% अस्पष्टता र भोला।
तह मास्क उपकरण लेयरलाई लुकाउन वा प्रदर्शन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन प्रयोग गरिएको छ। मास्कको धेरै र धेरै उपयोगी प्रयोगहरू छन्। हामी तपाइँलाई यो देखाउनको लागि एउटा लि leave्क छोड्नेछौं
ठिक छ, यदि हामी मेन लेयरमा जान्छौं भने हामी लेयर मास्क थप्दछौं, फोटोशपको तल्लो दायाँ बटनमा (रातो अघिल्लो छविमा देखाइएको जस्तो)। एक पटक सिर्जना भए पछि हामी यसमा काम गर्दछौं। हामी रंग ब्लेड कन्फिगर गर्नेछौं। कालो अगाडि र color र सेतो पृष्ठभूमि रंग। भिडियोले वर्णन गरे जस्तै, कालो लुकाउन प्रयोग गरियो। अवश्य पनि, लेयर मास्क खाली हुनुपर्दछ, यसमा काम गर्न सक्षम हुन। यदि सबै तयार छ भने, हामी ब्रश लिन्छौं, तपाईले छानेको आकार, १००% को अस्पष्टताको साथ र हामी यस क्षेत्रमा लुक्न जान्छौं। यस केस स्टडीमा हामी केटीलाई हावामा हावामा उडाएको जस्तो देखिने बनाउन ब्यारेल हटाउनेछौं।
मेटाइएको वस्तुको प्रत्येक किनारहरू राम्रोसँग रेखांकित गर्नुपर्नेछ यदि तपाईं एक वास्तविक स्पर्श प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने। छविको अन्य क्षेत्रहरू हटाउन कोसिस नगर्नुहोस् जुन केटीको खुट्टा जस्ता बढी आवश्यक हुन्छ। अवश्य पनि, यदि तपाईंले गल्ती गर्नुभयो भने, तपाईं अग्रभूमि र पृष्ठभूमि रंगहरू परिवर्तन गरेर सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। सेतो अगाडि र कालो पृष्ठभूमि राख्दै र गलत हटाइएको क्षेत्रमा ब्रश पार गर्दै।
केही अतिरिक्त स्पर्श
जब तपाईंसँग सबै कुरा राम्रोसँग रेखांकित गरिएको छ भने तपाईं छविलाई केही हदसम्म पुनःचोर्त गर्न सक्नुहुनेछ, जब तपाईं यहाँ देख्नुहुनेछ कि यो केही जलेको छ, हामी छविलाई कसरी रूपरेखा बनाउने भन्ने सानो उदाहरणहरू दिन गइरहेका छौं ताकि यो अझ राम्रो देखिनेछ।
HDR प्रणाली वा Hyperrealism वा Lefovers / हाइलाइटहरू सबैभन्दा सामान्य हो यस प्रकारको फोटोग्राफीमा। यदि तपाईं आफ्नो टाउको धेरै जलाउन चाहनुहुन्न भने, यी उपकरणहरूमा जानुहोस् र तपाईं अधिक पेशेवर र छिटो स्पर्श पाउन सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन फिल्टरहरूसँग केहि समान छ, अधिक सूक्ष्म टच-अपर्याप्तसहरूसँग। यी उपकरणहरू छवि / समायोजनमा हुन्, तपाईं धेरैलाई पहिले नै थाहा छ। अर्को उपकरण जुन व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ स्तर र वक्रहरू हुन् (समान ट्याबमा अवस्थित)। यदि तपाईंको फोटो जलाइएको छ - जस्तो हाम्रो केस- हो भने, यसले अलि बढी अन्धकार पार्छ र नराम्रो देखिँदैन। तर तिनीहरूलाई दुरूपयोग नगर्नुहोस्, यो धेरै असत्य देखिन्छ।
अर्को तरिका ब्रश वा फिल्टर उपकरणहरूसँग खेल्नु पनि हो। यदि तपाइँ कुनै निर्दिष्ट क्षेत्रमा ब्रश तान्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाइँ यसलाई दिईएको मास्कको प्रकार छनौट गर्नुहुन्छ, (नरम बत्तीले सामान्यतया छविलाई दिइने ब्रशस्ट्रोक नरम गर्न काम गर्दछ) तपाइँ आफूले खोजिरहनु भएको प्रभाव सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ म तपाईंलाई मूल छवि र retouched छवि को एक उदाहरण दिन्छु, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ केहि देख्न को लागी कम भारी प्राप्त। यद्यपि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ। पनि, अब जस्तै, एक छाया राख्न जुन पहिले अवस्थित थिएन।
निश्चित रूपले तपाईंहरू धेरै जसो नेटवर्कहरू दैनिक पछ्याउनुहुन्छ यसले यो प्रभाव देख्यो र कस्तो देखिन्छ भनेर सोच्न थाल्छ, किनकि यदि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यदि यो आधारभूत फोटोशप हो भने। यसले सिर्जना गर्न धेरै समय लिदैन र धेरै उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्दैन, केवल एक ब्रश र लेयर मास्क। त्यो सजिलैसँग फोटोशपबाट प्राप्त हुन्छ। धेरै पृष्ठहरू ती हुन्। यस प्रकारको प्रक्रियामा सामान्य कुरा यो हो कि समस्याहरू पहिलो प्रयासहरूमा देखा पर्दछन्, टिप्पणीहरूमा तपाईले आफ्नो शंकाहरू छोड्न सक्नुहुन्छ र म खुशीसँग जवाफ दिनेछु ताकि तपाईको सन्तोषजनक नतीजा प्राप्त होस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » फोटोशप आधारभूत: कसरी फोटोको अंश मेटाउने
Hernan ड्यूक Alvarado भन्यो
Hernan ड्यूक Alvarado लाई जवाफ दिनुहोस्
अनुप्रयोगको बारेमा सोच्न रोक्नुहोस् र अनुभव चित्रण गर्न सुरू गर्नुहोस्